Eo Aminay dia sonia Apk Download maimaim-poana ho an'ny Android | APKOLL
Eo Aminay dia misy sonia Apk Download maimaim-poana ho an'ny Android
Miverina miaraka amina mod mahagaga hafa izahay ho an'ny Imposter eo afovoantsika mpilalao, izay manome ny mpilalao lenta mandroso traikefa amin'ny lalao. Izy io dia manome ny fanangonana hacks tsara indrindra, izay ahafahan'ny mpilalao mankafy ny filalaovana. Raha te hampiasa an'ity rindrambaiko ity ianao, dia miasà sonia ho an'ny Us Smartphone ho an'ny finday avo lenta Android na Tablet anao ary manomboka milalao ny lalao an-tserasera tsara indrindra.
Imposter among us dia lalao 2D an-tserasera marobe, izay manome ny lalao famoronana sy manintona indrindra ho an'ny mpilalao. Izy io dia lalao multiplayer, izay manasa mpilalao avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Io no lalao Android malaza indrindra, izay manana mpilalao mihoatra ny tapitrisa.
Izy io dia lalao mifototra amin'ny fantasy, izay ahitana mpisandoka iray na roa sy mpiasan'ny ekipa. Miainga amin’ny zava-nitranga tao amin’ny sambon-danitra izany rehetra izany, izay misy fiantraikany amin’ny mpiasa sasany. Ireo mpikambana voakasika dia antsoina hoe mpisandoka, izay tsy maintsy manaisotra ny mpikambana hafa. Saingy tsy maintsy mitady ilay mpisandoka ny mpiasan'ny ekipa ary mamoaka azy ireo.
Noho izany, mahaliana ny filalaovana, izay misy endri-javatra karama samihafa ho an'ny mpampiasa. Noho izany, eto izahay miaraka amin'ity kinova maodely mahavariana ity, izay manolotra ny fanangonana ireo endri-javatra karama maimaim-poana sy maro hafa. Izahay dia hizara izany rehetra izany amin'ny antsipiriany etsy ambany.
Topimaso momba ny Mod misy sonia antsika
Izy io dia fampiharana Android Mod, izay maodely amin'ny lalao hetsika Android tsara indrindra eo anivontsika. Ny kinova mod dia manome ny mpampiasa hahazo maimaim-poana ny serivisy karama rehetra amin'ny lalao ary koa manome fanangonana hacks be dia be hanatsarana ny fahaizany sy ny lalao. Ny hacks rehetra sy ny endri-javatra rehetra dia misokatra ho an'ny rehetra, izay midika fa maimaim-poana ny fampiasana.
Misy fiasa marobe azo alaina ho an'ny mpampiasa, izay azon'ny mpilalao idirana amin'ny rindranasa ity. Io no rindrambaiko novolavolaina farany, izay midika fa mifanaraka izy io, miaraka amin'ireo lozisialy farany lalao. Noho izany, tsy manana olana ireo mpilalao amin'ny fidirana amin'ny mpizara na fanaovana lalao amin'ny mpilalao hafa.
Ny Mod Menu dia manome fifehezana feno amin'ny hacks ho an'ny mpampiasa, izay ahafahanao mitantana mora foana ny manampy sy manala ny hack rehetra. Manolotra menu mod izy io, izay manolotra ny fanangonana hacks rehetra ho an'ny mpilalao mba hifehezana mora foana. Misy hacks maro isan-karazany azo alaina amin'ity menio ity.
Misy fizarana samihafa hita ao amin'ity menio ity, izay ahafahan'ny mpampiasa mahita mora foana ireo fiasa hita. Ny fizarana voalohany dia manome hacks gameplay, izay azonao ampiasaina hanatsarana ny gameplay. Manolotra fifehezana feno ny lalao izy io.
Ny fizarana faharoa dia ny fifehezana ny mpampiantrano izay manome ny mpilalao hifehy ny lalao iray manontolo alohan'ny hanombohany. Noho izany, afaka mifehy tanteraka ny lalao ianao ary misafidy ny anjara toeran'ny mpilalao koa. Noho izany, afaka manao valiny eo noho eo amin'ny lalao ianao ary mankafy azy io.
Misy ihany koa ny fizarana hafa azo ampiasaina ho an'ireo mpampiasa, izay misy ny misc, ny kaonty ary maro hafa. Ny fizarana misc dia manolotra ny fanesorana sy fanampiana doka, sazy, tatitra ary serivisy hafa. Ao amin'ny kaonty, afaka mahazo maimaim-poana ny endri-javatra rehetra nalain'ny lalao ny mpampiasa.
Manolotra ireo mpampiasa izy hahazo maimaimpoana ny satroka, ny hoditra ary ny biby fiompy maimaim-poana. Misy endri-javatra mahavariana maro kokoa azo zahana an'ny mpampiasa. Noho izany, misintona eo afovoantsika sonia ho an'ny fitaovana Android ary manomboka milalao ny lalao tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra.
anarana Eo Aminay Voasonia
Mod farany novolavolaina
Mifanaraka amin'ny Servers
Manome fanaraha-maso feno ny Hacks
Fizarana samihafa dia manome trano fialofana voafaritra
Makà hoditra, biby fiompy ary satroka maimaim-poana
Mora ny mitantana maody
Fomba maodely maro ato aminay ho anao.
Raha te-misintona ny dikanteny mod ianao dia eo amin'ny toerana mety. Izahay hizara an'ity rindranasa ity aminareo rehetra. Noho izany, tsindrio ny bokotra fampidinana, izay misy eo an-tampon'ny sy ity pejy ity. Hanomboka ho azy afaka segondra vitsy ny fisintomana.
Among Us Signed Apk no fomba tsara indrindra ahafahan'ny mpilalao manana traikefa lalao tsaratsara kokoa. Noho izany, sintomy ity lalao ity ary mahazoa fiasa mahavariana. Raha manana olana ianao amin'ny fisintomana an'ity fampiharana ity dia azonao atao ny mampiasa ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany hifandray aminay.
Sokajy Tools, Games Tags Eo Aminay Voasonia, Among Us Signed Apk, Eo amintsika no sonia ho an'ny Android, Among Us Signed Mod Post Fikarohana